चुनाव स्थगित गर्ने सम्झौता देउवाले जेठ ३० गते नै गरेको खुलासा | NepalDainik
चुनाव स्थगित गर्ने सम्झौता देउवाले जेठ ३० गते नै गरेको खुलासा
प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनाव स्थगित गर्न बाहिर राजपाको टुल्स प्रयोग गरिए पनि राजपाले आफ्नो आग्रहमा चुनाव स्थगित नभएको वताइसकेको छ । उसले तेस्रो चरणका लागि असोज २ मा तोकिएको चुनावमा भाग लिने नलिने वा अहिलेको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति कांग्रेस–माओवादीसँग नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
प्रदेश २ कै मतदाता, अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग सवैले चुनाव स्थगित नगर्न खवर्दारी गरे । जसलाई देखाएर चुनाव सारियो, उसैले हामीले चुनाव सार्न लगाएका होइनौं भन्यो । त्यसो भए चुनाव सार्नै पर्ने दवाव देउवा–दाहालसामु कसले दिएको थियो ? कांग्रेसको इतिहासमै दाग लाग्नेगरी र आम कांग्रेसजनले शीर निहुराउनु पर्ने कामका लागि देउवालाई कसले वाध्य पारे ? सिंगो देश निर्वाचनका पक्षमा जुट्दा राजपालाई देखाएर चुनाव स्थगन गरिनुका पछि रहस्यको अर्काे पाटो खुल्न थालेको छ ।
चुनाव स्थगनका लागि राजपा देखाउने पक्ष मात्रै थियो । यसको भित्री पाटोमा सक्रिय थिए बिमलेन्द्र निधि, अमरेशकुमार सिंह, वर्षमान पुन र भारतीय राजदूत मञ्विसिंह पुरी । चुनाव सार्ने बाहिरी तारतम्य खडा गर्न राजपालाई ‘आन्दोलन’ चर्काउने योजना बनाइदिने र राजपाका तिनै गतिविधि बाहिर प्रस्तुत गर्न कांग्रेसका नेताहरुको बैठक बसाएर राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने काममा यी चार जना सक्रिय थिए । राजपाले चुनावको जतिसुकै विरोध गरे पनि मधेसमा चुनाव विथोल्ने उसको बुता थिएन । केही नेपालतिरकै र बाँकी भारतबाट लडाकु समुह ल्याएर झण्डा जलाउने लगायतका हिंसात्मक कार्य गर्ने र त्यति गरेपछि चुनाव सार्न पर्याप्त कारण दिन सकिन्छ भन्ने उनीहरुको योजना थियो ।
विरोध प्रदर्शनमा जनताको समर्थन देखाउन सम्भव थिएन । सानो समुहले हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेपछि त्यसले तरंग पैदा हुने र त्यसैबीच काठमाडौंमा तीब्र राजनीतिक चलखेल गर्नु पर्छ भन्ने उनीहरुको सल्लाह थियो । त्यस सल्लाह अनुरुप जेठ ३० गते दिन २ नम्बर प्रदेशका केही सहरमा कांग्रेस, एमाले र संघीय समाजवादी फोरमका कार्यक्रम बिथोल्ने र झण्डा जलाउने, जेठ ३० गते नै कांग्रेसका नेताहरुको अलगै भेला गरी चुनाव सार्न दवाव दिने र त्यसै दिन भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चुनाव सार्न निर्णायक दवाव दिने काम भएको थियो ।
त्यसअघि नै भारतीय राजदूत पुरीले राजपाका नेताहरुलाई पटक पटक दूतावास बोलाएर सल्लाह गरेका थिए । जसरी पनि चुनाव बिथोल्ने राजपा र भारतीय राजदूतबीच सल्लाह भए पनि दूतावासले राजपालाई चुनावमा जान सल्लाह दिएको सूचना प्रवाह गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसका लागि दैनिक छापा माध्यममा काम गर्ने पत्रकारको सहायता लिने भन्नेसम्म उनीहरुबीच छलफल भएको सहभागि एक नेताले वताए ।
त्यस लगत्तै निधि, सिंह, पुन र पुरीबीचको छलफलले असार १४ का लागि तोकिएको चुनाव सकेसम्म सबै प्रदेशमा हुन नदिने र यदि चुनावबाट सरकार पछि हट्नै नसक्ने वाध्यता भए तराईका भूभागलाई अलग गरेर मात्रै असार १४ को चुनाव गर्ने समझदारी गर्यो । सोही समझदारी अनुसार जेठ ३० गते निधिले कांग्रेसका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरुको भेला मध्यवानेश्वरमा मिनेन्द्र रिजालको घरमा गराए । निधिको पहलमा भएको सो बैठकमा असार १४ गते चुनाव गरे २ नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले पहिलो हुने रिपोर्ट प्रस्तुत भयो । त्यही कुरा लिएर प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ जाने र चुनाव सार्न दवाव दिने निर्णय त्यहाँ भयो । निधिको पहलमा भएको यो भेलाले भारतीय राजदूतसँग भएको सल्लाह अनुरुप आफ्नो काम गर्यो पनि । ‘अरु कुरा मलाई थाहा भएन, मधेसमा हिंसा कायम राखेर चुनाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आयो । त्यसै अनुसार हामीले पार्टीलाई दवाव दिएका हौं’ बैठकमा सहभागि कांग्रेसका नेताले भने ।
उक्त भेला लगत्तै कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा निधिले चुनाव सार्नु पर्ने प्रस्ताव ल्याए । प्रस्तावमाथि बालकृष्ण खाँड र डा प्रकाशशरण महतले ठूलै विरोध जनाए । त्यसपछि देउवाले बैठकको एजेण्डा नै अन्यत्रै डाइभर्ट गरेर उम्मेदवार छान्न बैठक बोलाएको भने । कांग्रेसको बैठक अनिर्णयमै सकियो । साँझ प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय राजदूत पुरीले भेटवार्ता गरे । पुरीले चुनावकै विषयमा मुख्य चासो राख्ने नै भए । ‘प्रदेश नम्बर २ मा त्यस्तो अशान्ति छ, कसरी गराउनुहुन्छ चुनाव ?’ भारतीय राजदूत पुरीको भनाई उद्धृत गर्दै जानकार स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं गम्भीर संकटमा हुनुहुन्छ, यदि त्यहाँ ठूलो हिंसा भड्कियो भने त तपाईंलाई ठूलो संकट आउन सक्छ नि ।’ पुरीसँगको भेटमा देउवाले दोधार प्रकट गरिरहे । देउवाको दोधार देखेपछि राजदूतले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन धेरै मेहनत गरेर बनाइएको त्यो समेत टुट्न सक्ने स्मरण गराए । संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि तहको चुनाव नगर्ने प्रतिवद्धता गठबन्धन बनाउँदै भएको र त्यसमा मधेसी दलको समेत समर्थन जुटाइदिएको देउवालाई स्मरण गराए । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले देउवालाई अझै खुलेर भन्यो– ‘प्रचण्डजीले बैशाख ३१ गतेको चुनावलाई दुई चरण भनेर किन सारेको भन्ने तपाईंलाई थाहै छ, संविधान संशोधन नगरी चुनाव सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको थियो ।’
भारतीय राजदूत पुरीसँगको भेटपछि देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आफूलाई निकै संकट परेको वताए । दाहालले एमाले नेताहरुसँग सल्लाह गर्ने कुटनीतिक जवाफ दिए । तर चुनाव सार्न खोजे एमालेले विरोध गर्ने निश्कर्ष उनीहरुले निकाले । त्यसबेलासम्म बिमलेन्द्र निधि र वर्षमान पुनले राजपाका नेताहरु सहमतिमा आउन सक्ने भन्दै सन्देश ल्याए । उनीहरु दुवैजनालाई राजपाका नेताहरुसँग सम्पर्कमा रहने जिम्मेवारी थियो ।
असार १ गते सरकारले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्ने निर्णय गर्दा धेरैलाई के लागेको छ भने राजपा र सत्तासीन अरु दलबीच अचानक सहमति भएर चुनाव स्थगित भएको हो । तर सकेसम्म सबै चुनाव स्थगित गर्ने र नसके तराई भूभागमा मात्रै भए पनि चुनाव स्थगित गर्ने र कुनै न कुनै रुपमा राजपाको ‘आन्दोलन’लाई टिकाईराख्ने समmभदारी पहिले नै भएको थियो । त्यही समझदारी अनुसार राजपाका नेताहरु राजेन्द्र महतो बीरगञ्ज र राजकिशोर यादव जनकपुर गए र यता महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादव वार्तामा बसे । सरकारले राजपासँग सहमति भयो भनेर चुनाव स्थगित गर्यो राजपाका नेताहरुले पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको कुरा बाहिर ल्याउँदै कुनै सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
राजपालाई कांग्रेसको भरथेग
गृह मन्त्रालयले राजपाको आन्दोलनका बारेमा आफ्नो निकाय मार्फत ब्रिफिङ त्यही बेला लिएको थियो । उसले राजपाको आन्दोलनमा जनता सहभागि नभएको र जहाँ जहाँ हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन् त्यहाँ अधिकतम २७० जनासम्मको समुह देखिएको रिपोर्ट ल्याएको थियो । अन्य ठाउँमा भने दुईचार जना मान्छेले हिंसा भड्काएको र गृह प्रशासनले त्यसलाई सजलै नियन्त्रण गरेर चुनाव गर्न सक्ने रिपोर्ट पनि थियो । राजपाको पक्षमा मान्छे नै नभए पनि उसलाई तराई मधेसको ठूलो शक्ति रहेको सन्देश दिन चुनाव स्थगित गर्नै पथ्र्याे । त्यसका लागि राजपाको प्रदर्शनमा कांग्रेस कार्यकर्ता सहभागि हुने गरेका थिए । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनामा कांग्रेसका कार्यकर्ताको बाक्लो सहभागिता थियो । त्यस्तै प्रदेश २ को चुनाव नगर्ने भन्नेमा भारतीय राजदूतसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवा स्पष्ट थिए । त्यसै कारण कांग्रेसले प्रदेश नम्बर २ को उम्मेदवारका विषयमा छलफल नै गरेको थिएन ।
अतिवाद मलजलमा कांग्रेस
स्थानीय तहको चुनाव स्थगित गर्न सतहमा राजपालाई देखाइए पनि भित्री तहमा भने चुनाव स्थगित गर्ने कांग्रेस हो । जुन जुन मुद्दामा भारत जोडिएको छ, त्यसमा कांग्रेस र राजपाबीचको सम्बन्ध पहिले देखि नै छुट्याउन गाह्रो थियो । संविधान जारी गर्ने बेला पनि कांग्रेसका तराई मधेसका सांसदहरुको पटक पटक भेला भएको थियो । त्यसको नेतृत्व निधि र अमरेशले गरेका थिए । उनीहरुले पटक पटक विज्ञप्ति निकालेर संविधान जारी गर्नबाट रोक्नु पर्ने वताएका थिए । संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि कांग्रेसको यो विङले राजपा भन्दा फरक एजेण्डा राखेको छैन । संविधान संशोधन नभई चुनाव नहुने उसले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएको छ । अहिले स्थानीय तहको चुनाव स्थगित गर्न पनि कांग्रेसको त्यही फ्याक्टर प्रयोग गरिएको हो । शेरबहादुरको सत्ता आकांक्षाको कमजोरी राम्रोसँग बुझेको निधि नेतृत्वको त्यो समुहले कांग्रेसलाई मधेसी मोर्चाको लगाम भित्र लगेको देखिन्छ । देउवासामु कांग्रसका अन्य नेता प्रतिवादमा उत्रिन नसक्ने परिस्थिति रहेकाले निधि मार्फत हुने कांग्रेसको राजपाकरण अनुमोदन हुँदै आएको छ । (Source: chakrapath)
Posted by Becoming Kishor at 5:43 PM
No Comment to " चुनाव स्थगित गर्ने सम्झौता देउवाले जेठ ३० गते नै गरेको खुलासा "